ILa Palaumarde, yindlu yosapho kwi-hamlet
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguLaurence
ILa Palaumarde ayiyondlwana! Yindlu yosapho. Apha uya kufumana iibuffets ezinkulu kunye neekhabhathi ezindala, iitrinkethi ezizele yimbali kunye neencwadi eziye zafundwa zaphinda zafundwa!
Amatye amadala kunye neenkuni ezifudumeleyo zikhona ukuze zikuhende kwaye zikuthandele. Ukuhlala apha kufana nokwabelana ngekhaya lika-anti omdala okanye ukwamkelwa ngumhlobo wakho osenyongweni kwindlu yakowabo.
Le ndlu yamatye yenkulungwane ye-17 neye-18 ihleli kwigadi ye-1000 m2 ngombono wentlambo kunye namadlelo.
Kumgangatho ophantsi, ikhitshi-igumbi lokutyela elikhulu lilungelelaniswe kwindawo yomlilo.
Kumgangatho woku-1, iikhushini ezithambileyo zegumbi lokuphumla lethala leencwadi zilindele iseshoni yeDVD okanye utye ulonwabo olulungileyo. Isofa yibhedi yomntwana osemtsha okanye umntu omdala.
Kumgangatho ophezulu, igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini kunye nencinci encinci yomntwana. izinto zokulala zisanda. Igumbi lokuhlambela kunye nebhafu zivuliwe kwaye kukho indlu yangasese phezulu.
4.0 · Izimvo eziyi-7
Kwindawo ephakamileyo ye-900 m, i-hamlet apho indlu ihleli khona kwindawo enqabileyo ye-Auvergne Volcanoes Natural Park, e-Cézalier. UCézalier olifaneleyo igama lakhe lesiqhulo elithi "Little Mongolia"!
Ngeenyawo, ngebhayisekile yasentabeni okanye ngehashe, le ndawo isembindini weparadesi yabakhenkethi.
Ubutyebi bezityalo kunye nezilwanyana buya kukumangalisa.
Abathandi bembali kunye nelifa lemveli abayi kuba nexesha elaneleyo lokuhlala ukutyelela amabandla aseRoma, amaXesha aPhakathi kunye neenqaba zeRenaissance kunye needolophana zamandulo ngaphakathi kwe-50 km ngeenxa zonke.
Iishizi, i-ham ephilileyo, inyama ye-Salers ... qaphela i-kilos: I-Auvergne cuisine ilungile kakhulu ukuxhathisa ukusetyenziswa kakubi! Ukumodareyitha kubalulekile ngokufanayo ngokwenza ukhenketho lwabavelisi bewayini eBoudes (7 km).
Abalandeli beemvakalelo ezinamandla banokuzama isandla sabo kwi-paragliding; kwisityibilizi; kwibhaluni yomoya oshushu; kwi-autogyro (Issoire aerodrome 15 min kude); ngesikhephe emanzini ezimhlophe (kwi min Allier 15) ... Ayinakwenzeka ukuba yonke into, le "ibala" phantse obungapheliyo de zip umgca nyama- Super Besse (45 imiz) okanye wepikiniki kwi phakathi amarhamncwa Ardes Animal Park (imizuzu eyi-10)!
Wamkelekile ... Owu ... Le yindawo ebuthathaka yaseLa Palaumarde! Eli likhaya lethu leholide, ngoko asihlali apho. Sizakuthuma ummelwane wethu kuNelly ukuba akuvulele ucango akushiyele isitshixo. Sinabamelwane abalungileyo abanokukucebisa kwiihambo oza kuzenza.
Sihlala sinakho ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho ngeenkcukacha, ulwazi olwahlukeneyo, iingcebiso okanye iidilesi ezixabisekileyo, kodwa ngefowuni!
Akukho reception ephilayo, kunjalo, kodwa uya kuthi cwaka, ngaphandle kwabanini emqolo wakho! Ke enkosi ngokungangcatshi ithemba lethu: iincwadi, iitrinkethi, izinto ... sibambelele kuyo. Bayinxalenye yekhaya lethu, inxalenye yembali yosapho lwethu: banakekele ngokungathi ngabaka-anti wakho omdala okanye umhlobo wakho osenyongweni!
Sikunqwenelela ukuhlala okuhle kwaye sinethemba lokuba uyayithanda iLa Palaumarde njengoko siyithanda.
Wamkelekile ... Owu ... Le yindawo ebuthathaka yaseLa Palaumarde! Eli likhaya lethu leholide, ngoko asihlali apho. Sizakuthuma ummelwane wethu kuNelly ukuba akuvulele ucango akushi…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Rentières